Fanamafisana ny hery fiarovana :: Azo iverenana sotroina ny tambavy CVO • AoRaha
Afaka manohy misotro ny tambavy “Covid-organics” na CVO ny olona efa nisotro izany nandritra ny herinandro, indrindra ireo olona tsy afaka manao ny fihibohana ao antrano fa voatery mivoaka isan’ andro noho ny antony samihafa.
“Toy ny fisotroana ny tambavy rehetra, dia mijanona mandritra ny dimy ambin’ny folo andro eo ho eo, izay vao afaka manohy sy miverina misotro ny tambavy CVO indray. Mila hajaina io elanelana roa herinandro io raha hanohy ny fisotroana azy”, hoy Rakotoson Haingo, tompon’andraikitra eo amin’ny Ivon-toeram-pikarohana momba ny fanafody avy amin’ny zava-maniry na ny IMRA.
Mahazo manohy ny fihinanana ny tambavy “CovidOrganics” ny olona rehetra afaka misotro izany, na ny zaza na ny olon-dehibe, saingy tsy maintsy manaja ny fatra sahaza ny tsirairay. Hita eny amin’ny toerana fivarotampanafody sy eny amin’ny fivarotana ny fanafody vokarin’ny IMRA ny tambavy CVO. Misy amin’ny endriny roa, efa voafangaro amin’ny rano ao anaty tavoahangy sy vovony, izay jifaina manomboka amin’ny 1500 ariary ny “Covid-organics”. Manampy ny hery fiarovana amin’ny fisorohana ny valanaretina ny fisotroana azy.
Fanjifana herinaratra sy trano :: Azo aloa tsikelikely ny faktioran’ ny Jirama volana jona
Fahoriana ateraky ny valanaretina :: Vehivavy matin’ny “Covid-19” teo am-piterahana